Mpikambana Ao Amin’ny NewsFrames Slack Ve Ianao? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2018 6:56 GMT
Miarahaba antsika rehetra, indro misy fanavaozambaovaon'ny NewsFrames, miampy ny antsipirihany mikasika ny toerana itafatafan'ny olon-drehetra momba ireo tetikasa NewsFrames.
Ny tena marina, tianay ho fantatrao hoe aiza no mitranga ny tafa ao amin'ny Slack — jereo etsy ambany ireo fantsom-baovao sy tetikasa sasantsasany efa miasa. Raha mbola tsy ao amin'ny Slack ianao, andefaso imailaka i Nevin amin'ny nevin.thompson[at]globalvoices.org, ary ho ampidiriny ao ianao. Na, mamelà fotsiny hafatra eto ambany eto.
Resadresaka 6 ao amin'ny Slack : Iza Amin'Ireo No Mahaliana Anao ?
Hatramin'ny volana Janoary izay nanombohanay, tena nazoto tokoa izahay tao amin'ny Slack niaraka tamin'ireo mpikaroka sy mpandray anjara an-tsitrapo maro, nieritreritra, nanao vakiraoka ary nikaroka sy nanoratra tantara.
Ankoatra ilay fantsom-baovao MainFrames Slack reniny, nanolotra lohahevitra ara-tantara ihany koa ilay vondrona ary nanomboka niasa taminà tetikasa, miresaka azy ireny izahay ao anatin'ireto fantsona manaraka ireto:
1) Fikorontanan'ny vaovao : fampahalalam-baovao diso, fanovàna vaovao, fampielezan-kevitra (rohy mankany amin'ilay fantsona Slack)
2) Famelabelarana: fanehoana kolontsaina, ny lahy sy vavy, ny firenena (rohy mankany amin'ilay fantsona Slack)
3) Fifindràmonina : tantara momban'ny fifindràmonina (rohy mankany amin'ilay fantsona Slack)
4) “Rising Frames”: fampiharàna ny fanadihadiana ireo rakitra mba hahafahana mandinika ny fampahafantàrana ny olona ireo vondrom-piarahamonina zanatany sy ireo voahilikilika : (rohy mankany amin'ilay fantsona Slack)
5) “Power Mapping” : fametrahana ny “meme” ho anaty sarintany (rohy mankany amin'ilay fantsona Slack)
6) Lisitr'ireo Filazambaovao : ampio izahay hanome loharanom-baovao marim-pototra ho an'ny firenenao na ny faritra misy anao ho an'ny Media Cloud (rohy mankany amin'ilay fantsona Slackl)
Ankoatra izay, ho an'ireo mpandika teny ao amin'ny Lingua dia nanokatra ny #nf_translation koa izahay ho toerana iray hifanohanana/hifanampiana momba ny fomba fandikàna ireo teny manahirana ao amin'ny NewsFrames (framing, framespotting, sns). Anontanio ny Lingua Community Slack raha mila fanazavana fanampiny.
Inona no Lohahevitra NewsFrames mifandraindraika aminao ?
Koa raha vonona ny hiroso ianao, iangaviana hifandray mivantana amin'i Nevin na i Connie ao amin'ny newsframes[at]globalvoices.org. Na tonga dia midira avy hatrany anatin'ny iray amin'ireo fantsona Slack etsy ambony etsy ireo.
Manontany tena ve ianao hoe inona no zavatra atolotry ny NewsFrames? Jereo ireto famaritana mahafinaritra ireto :
Te hahafantatra misimisy kokoa mikasika ny fomba fiasan'ny NewsFrames? Jereo ireo fitarihàna maro samy hafa ao amin'ny NewsFrames, toy ito :
Misaotra … ary manantena ny hahita anao ao amin'ny Slack!
Connie, Nevin ary ny ekipan'ny NewsFrames
22 ora izayAmerika Latina
22 ora izayOseania